Cracker Guide 2.0 (Full Version)
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » Cracker Guide 2.0 (Full Version)
1 Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 30th July 2010, 3:16 pm
အောက်ပါ link မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မရှိတော့ပါဘူး။
2 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 30th July 2010, 3:18 pm
နောက်တစ်ပါတ်မှာတော့ လူပြိန်းများအတွက် တစ်မိနစ်အတွင်း Xilisoft ဆော့ဖ်ဝဲလ်များရဲ့ Serial ရှာခြင်း Flash သင်ခန်းစာကို upload လုပ်ပေးပါမယ်။
3 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 30th July 2010, 3:33 pm
တညျနရော : Over Your Head
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-07-26
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : -3
4 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 30th July 2010, 5:45 pm
လူပြိန်း = They don't want to learn Assembly or C++. They juz want to crack the application by following the Tutorials. They don't want to start from basic. They think that they have no time and they can catch up the pro from shortcut teaching system.
That is general def: for လူပြိန်း.
may be, I'm wrong.
5 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 1st August 2010, 10:02 pm
ကျေးဇူးပါ ကို rythm.
ဒါနဲ့ HDD ပျက်သွားတယ်ဆို။ Backup ကနေ ပြန်ရတာလားဗျ။ ဒါမှမဟုတ် အစကနေပြန်ရေးထားရတာလား...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အလကားထုတ်ပေးလိုက်တာ အတော်ကောင်းပါတယ်။ လေးလည်းလေးစားတယ်။
6 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 3rd August 2010, 12:10 pm
လူပြိန်းဆိုတာကတော့ နှိမ့်ချတဲ့ သဘောနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အလွယ်တကူနဲ့ cracking knowledge သိပ်မရှိတဲ့သူတွေ serial ကို အမြန်ရှာနိုင်အောင်လို့ သင်ခန်းစာ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
7 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 3rd August 2010, 3:39 pm
thank alot bro [You must be registered and logged in to see this link.]... i am busy with my new job so i can't come to online... i can't post so... next time i will post any information.... thank for all.
8 [Ebook] on 3rd August 2010, 7:19 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-06-28
[You must be registered and logged in to see this image.] ကျေးဇူးပါ
9 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 3rd August 2010, 10:11 pm
ကို rhythm ကို အရမ်းလေးစားပါတယ်ဗျာ။
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ဗျာ...........
10 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 10th August 2010, 5:12 pm
11 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 31st August 2010, 12:38 pm
Cracker Guide 2.0 စာအုပ်မှ "အခန်း(၂၅) – Flashy ထရိုဂျန်နှင့် Windows Registry" အခန်းအစား မြန်မာပြည်ဖြစ် virus/trojan ဖြင့် အစားထိုးလိုပါသဖြင့် ပြည်တွင်းဖြစ် virus/trojan ထဲမှ ဖျက်အားအပြင်းဆုံး၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်အပေးဆုံး malware ကို RAR ဖိုင်ဖြင့် password ခံပြီး [You must be registered and logged in to see this link.] သို့ ပေးပို့စေလိုပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံ အသေးစိတ်ကို [You must be registered and logged in to see this link.] ဖိုရမ်နှင့် နောက်ပိုင်း Cracker Guider 2.x များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါမည်။ ပေးပို့သောသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
Cracker Guide 2.x အတွက် မျက်နှာဖုံးပေးပို့လိုပါက ၈.၅လက်မ x ၈.၅လက်မအရွယ် PNG ဓါတ်ပုံကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ (သို့) [You must be registered and logged in to see this link.] ဖိုရမ်တွင် တင်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေများ ပေးပို့သည့်ပုံမှ အကောင်းဆုံးပုံကို နောက် version များတွင် သုံးစွဲပေးပါမည်။ ဓါတ်ပုံ၏ အောက်ခြေထောင့်တွင် GFX by ur_nick စာတန်းထည့်သွင်းရန် မမေ့ပါနှင့်။ မျက်နှာဖုံးပေးပို့သည့်သူတိုင်းကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် Cracker Guide မှအခန်းသစ်များ ရေးသားပြီးစီးချိန်တိုင်း၊ အခန်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားတိုင်း ထိုအခန်းများကို အီးမေးလ်မှ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
12 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 6th April 2011, 4:15 pm
ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျာ .... ဒေါင်းထားပြီးသားရှိရင် [You must be registered and logged in to see this link.]ကို ပို့ပေးကြပါလားဗျာ .......
13 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 8th April 2011, 1:22 pm
ဟုတ်တယ် အကိုရေ Cracker_Guide_2.0 က ဒေါင်းလို့ မရပါဘူးခင်ဗျ
အကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကို ပို့ပေးလို့ ရမလားခင်ဗျ
14 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 9th April 2011, 12:09 pm
download link ၀င်လို.မရဘူးဗျ
15 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 12th April 2011, 2:11 pm
Cracker Guide 2.1 ကို upload site တစ်ခုခုတွင် တင်ပေးပါမည်။
16 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 14th April 2011, 2:41 pm
17 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 11th May 2011, 12:26 pm
I can't extract file corrupt ;(
I already tried many times pls help?
18 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 11th May 2011, 9:06 pm
rar က ဖြည်လို့ မရပါဝူးခင်ဗျာ
မရ ရအောင် ဖြည်လ်ိုက်တော့လဲ
မြန်မာစာနေရာတွေမှာ gtalk ကိုဇော်ဂျီမပြောင်းမိဘဲ
19 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version) on 15th May 2011, 12:13 am
20 Re: Cracker Guide 2.0 (Full Version)